Barkinta Kiiska Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Wershad Kiiska Barkinta
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta ubax jumlada ah barkimmo tuugo qurxin loogu talagalay barkinta guriga511601
Barkimadda Xaraashka ah (Gu'ga) Dahab DIY daabac gacmeedka dharka guriga lagu xiro fadhiga fadhiga barkinta qaabka yurubiyanka ah ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameys ah oo saddex-geesood leh, gacantu ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta jumlada jilicsan ee barkimada qurxinta ee barkinta guriga511602
Barkimadda Xaraashka-Xaraashka ah (Xagaaga) Kabaar DIY daabac gacmeed daabac ah dharka guriga fadhiga barkinta kuraasta Qaababka yurubiyanka ah ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex-geesood ah, gacanta ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta jumlada jilicsan ee barkinta qurxinta ee barkinta guriga511603
Barkinta kulul-iibinta (Dayrta) Kordhinta DIY ee daabacaadda gacanta daabacaadda dharka guriga ah barkinta fadhiga barkinta qalabka yurubiyanka ah ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacmeed lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta ubax jumlada barkimada qurxinta ee barkinta guriga 511605
Barkinta kulul-iibinta (Jiilaalka) Kordhinta DIY daabac gacmeedka dharka guriga dharka lagu xiro fadhiga barkinta qaabka yurubiyanka ah ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameys ah oo saddex-geesood leh, gacantu ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta jumlada jilicsan ee barkimada qurxinta ee barkinta guriga511606
Barkimadda iibinta kulul (Jilicsan sida brocade) Kordhinta DIY daabacaadda gacanta daabacaadda dharka guriga fadhiga barkinta barkinta qalabka yurubiyanka ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta jumlada jilicsan ee barkinta qurxinta ee barkinta guriga511607
Barkinta kulul-iibinta (Waqtiga xaadirka midabkiisu furan yahay) Dawaarka DIY daabac gacmeedka dharka guriga lagu xiro dharka barkinta fadhiga dharka yurubiyanka qaabka wax lagu qurxiyo, adeegso gacan-sameysid daabac seddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta ubaxa dharka jumladaha qurxinta ee barkinta guriga 511609
Barkimmo kulul-iibinaya (Baraf fudud laakiin qurux badan) Dhir DIY daabac gacmeed daabac ah dharka guriga fadhiga barkinta barkinta qaabka yurubiyanka ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta jumlada jilicsan ee barkimada qurxinta ee barkinta guriga511608
Barkimmo kulul-iibin ah (Fudud laakiin xasilloon oo xasilloon) Dawaar DIY daabac gacmeed daabac ah dharka guriga fadhiga barkinta barkinta qaabka yurubiyanka ah ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta jumlada jumlada ah ee barkinta qurxinta ee barkinta guriga 511610
Barkimmo kulul-iibinta (Qalbi fudud oo qurux badan laakiin qurux badan) Kabaar DIY daabac gacmeed daabac ah dharka guriga fadhiga barkinta barkinta qaabka yurubiyanka ah ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta jumlada dharka jumladaha qurxinta ee barkinta guriga 511611
Barkimadda iibinta kulul (Qaab fudud laakiin xarrago leh oo muuqaal ah) Kabaar DIY daabac gacmeed daabac ah dharka guriga lagu kariyo barkinta fadhiga qalabka yurubiyanka qaabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex geesood ah, gacanta ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta jumlada jumlada ah ee barkinta qurxinta ee barkinta guriga 511612
Barkimadda iibinta kulul (fudud laakiin xarrago leh) Dawaarka DIY ee daabacaadda gacanta daabacaadda dharka guriga fadhiga barkinta barkinta qaabka yurubiyanka ah ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Naqshadeynta jumlada naqshadeynta jumlada jilicsan ee barkinta qurxinta ee barkinta guriga 511613
Barkinta kulul-iibinta (Fudud oo qurux badan sidii hore) Kordhinta DIY ee daabacaadda gacanta daabacaadda dharka guriga fadhiga barkinta barkinta qaabka yurubiyanka ee qalabka wax lagu qurxiyo, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.